ကစားသမား အပွောငျးအရှနေဲ့ပတျသကျပွီး ယူနိုကျတကျ ဘာတှအေခကျအခဲဖွဈနလေဲ?
ခှကျခှကျလနျအရှုံးပှဲတှရေငျဆိုငျနရေတဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ကစားသမားအသဈချေါယူဖို့ လိုကိုလိုအပျနပေမေယျ့ အခုအခြိနျအထိရရေရောရာအကောငျအထညျမဖျောနိုငျဖွဈနပေါတယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးကစားသမားအသဈချေါယူတဲ့ကိစ်စမှာ ဘာတှတေိုငျပတျနသေလဲဆိုတာ တငျဆကျပေး ပါမယျ။ အဓိက ကတော့ ငှရေေးကွေးရေးစိုကျထုတျသုံးစှဲတဲ့အခကျအခဲပဲဖွဈပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ အပွောငျးအရှအေ့သုံးစားရိတျ အပိုထပျမံရရှိဖို့တောငျးဆိုထားတာကို ပိုငျရှငျ ဂလဇော မိသားစု က ပယျခလြိုကျတာကွောငျ့ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈကို ချေါယူဖို့အပါအဝငျ အခွားအပွောငျးအရှကေိ့စ်စတှပွေုလုပျဖို့ လညျးအခကျအခဲတှနေ့ရေတယျလို့သိရပါတယျ။
ဂလဇောမိသားစုဟာ ငှကွေေးပိုငျးမှာ ဘဏျနဲ့ခြိတျဆကျပွီး ခြေးငှသေုံးစှဲထားတဲ့ကိစ်စတှရှေိတယျလို့လညျး ကွားရပါတယျ။ အခုဆောငျးရာသီအပွောငျးအရှမှေ့ာ ပေါငျသနျး 50 သာအသုံးပွုခှငျ့ပေးထားတယျလို့ကွားရပွီး အဲဒီပမာဏဟာ ဖာနနျဒကျဈကိုချေါယူဖို့အတှကျတောငျ မပွညျ့မီတဲ့အနအေထား ဖွဈနပေါတယျ။ ဖာနနျဒကျဈကို ရောငျးခဖြို့အတှကျ စပို့တငျးအသငျးက ပေါငျသနျ6း0 လိုခငျြတာကွောငျ့ ယူနိုကျတကျ အသငျးဟာ နောကျထပျ ပေါငျ10သနျးလိုအပျနပေါတယျ။ အဲဒီပေါငျ ၁၀သနျးအတှကျ ဂလဇော မိသားစုထံတောငျးခံခဲ့ရာ မခှငျ့ပွုတာကွောငျ့ ဖာနနျဒကျဈ တဈယောကျ ယူနိုကျတကျကိုလာဖို့ ကိစ်စဟာဇာတျမြောဖွဈနပေါတယျ။ ယူနိုကျတကျနဲ့ဖာနနျဒကျဈတို့ရဲ့ဇာတျလမျးမပွီးပွတျဘဲကွနျ့ကွာနေ တာကွောငျ့ ဖာနနျဒကျဈကို မနျစီးတီးက ချေါယူမယျဆိုတဲ့သတငျးတှလေညျး ထှကျပျေါခဲ့ပါတယျ။
ယူနိကျတကျဟာ အစေီမီလနျကှငျးလယျလူ ကတျဆီ ၊ အငျတာမီလနျကှငျးလယျလူ ဗီစီနို နဲ့ အကျတီကိုကှငျးလယျ လူတှကေို အငှားနဲ့ချေါယူဖို့လိုကျလံကွိုးစားနပေမေယျ့လညျး အဆငျမပွဖွေဈနေ ပါတယျ။ အခုအခါမှာတော့ တရုတျကလပျရှနျဟိုငျးရှငျဟှာမှာ ကစားနတေဲ့ ဝကျဖို့ဒျတိုကျစဈမှူးဟောငျး အဈဟာလို (Ighalo) နှငျ့ မိုနာကိုမှာအငှားကစားနတေဲ့ လကျစတာတိုကျစဈမှူး ဆလကျမနီ (Slimani) တို့ထဲမှတဈဦးကို အငှားချေါယူဖို့ကွိုးပမျးလကျြရှိနပေါတယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ငှကွေေးသုံးစှဲမှုအပိုငျးမှာ နှရောသီအပွောငျးအရှတေု့နျးကလညျး အမြားကွီးသုံးခဲ့တာမဟုတျပါဘူး။
လာကာကူ ဖယျလိုငျနီ ဒါမီယံ တို့ကိုရောငျးခတြာကနေ ပေါငျသနျး၉၀ကြျောပွနျလညျရရှိထားပွီး၊ အဲဒီ ငှကွေေးနဲ့ မကျဂှိုငျးယား ဘဈဆာကာ ဂြိမျဈး တို့ကိုပွနျလညျချေါယူခဲ့တာကွောငျ့အသငျးရဲ့ အသားတငျအသုံးစားရိတျက ပေါငျသနျး၅၀ ကြျောသာရှိပါတယျ။ အသားတငျဝငျငှေ ပေါငျသနျး ၆၄၀ ကြျောရှိပွီး ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ၃ ဝငျငှအေကောငျးဆုံးအသငျးဖွဈတဲ့ ယူနိကျတကျ ဟာအခုဆောငျးရာသီအပွောငျးအရှမှေ့ာ အသငျးရဲ့ပုံရိပျတှကေဆြငျးလာနတောဖွဈပါတယျ။
ကစားသမားအပွောငျးအရှနေဲ့ပတျသကျလို့တော့နညျးပွဆိုးလျရှားကအခုလိုပွောပါတယျ။ “ကြှနျတျောတို့ အပွောငျးအရှေ့ နှဈခုလောကျကို လုပျဆောငျနတောကွောငျ့ ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကွညျ့ရပါမယျ။ ဈေးကှကျမပိတျခငျအသငျးကဝယျပေးနိုငျမလားစောငျ့ကွညျ့ရမှာပေါ့။ဝဖေနျပွောဆိုသံတှကေိုအမွဲအာရုံစိုကျ ထားလို့တော့မရပါဘူး။ ပွနျလညျတညျဆောကျရေးကိုအကောငျးဆုံးလုပျနိုငျမယျထငျပါတယျ။ အသငျးမှာ အုတျမွဈက ခိုငျမာဖို့အရေးကွီးပွီး သမိုငျးကွောငျးကို အခိုငျအမာ သိရှိဖို့လိုအပျပါတယျ။ အိမျတဈလုံးလိုပါပဲ ခေါငျမိုးကနစေလို့မရပါဘူး။ အခုလောလောဆယျ ကြှနျတျောတို့ မိုးမလုံတဲ့ကိစ်စတှရှေိခဲ့တယျဆိုတာသိပါတယျ။” ဆိုပွီးပွောပါတယျ။
ဒဏျရာရကစားသမားပေါငျးမြားစှာနဲ့လညျပတျနရေတဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျး ကိုဘယျသူတှရေောကျလာမလဲ ဆိုတာစောငျ့ကွညျ့ရပါမယျ။ လောလောဆယျမှာတော့ ကာရဈတနျလကေ့ငျြ့ရေးအစီအစဉျမှာ လငျဒီလော့ဒျနှငျ့ပေါ့ဘာဂျ တို့လာရောကျပူးပေါငျးခဲ့ကွောငျး သိရပွီး၊ Borthwick-Jackson အား Oldham Athletic အသငျးထံ ရာသီကုနျထိအငှါးခလြိုကျပွီလို့လညျးသိရပါတယျ။
ကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ယူနိုက်တက် ဘာတွေအခက်အခဲဖြစ်နေလဲ?
ခွက်ခွက်လန်အရှုံးပွဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ကစားသမားအသစ်ခေါ်ယူဖို့ လိုကိုလိုအပ်နေပေမယ့် အခုအချိန်အထိရေရေရာရာအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းကစားသမားအသစ်ခေါ်ယူတဲ့ကိစ္စမှာ ဘာတွေတိုင်ပတ်နေသလဲဆိုတာ တင်ဆက်ပေး ပါမယ်။ အဓိက ကတော့ ငွေရေးကြေးရေးစိုက်ထုတ်သုံးစွဲတဲ့အခက်အခဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အပြောင်းအရွှေ့အသုံးစားရိတ် အပိုထပ်မံရရှိဖို့တောင်းဆိုထားတာကို ပိုင်ရှင် ဂလေဇာ မိသားစု က ပယ်ချလိုက်တာကြောင့် ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကို ခေါ်ယူဖို့အပါအဝင် အခြားအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေပြုလုပ်ဖို့ လည်းအခက်အခဲတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဂလေဇာမိသားစုဟာ ငွေကြေးပိုင်းမှာ ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ချေးငွေသုံးစွဲထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်လို့လည်း ကြားရပါတယ်။ အခုဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ပေါင်သန်း 50 သာအသုံးပြုခွင့်ပေးထားတယ်လို့ကြားရပြီး အဲဒီပမာဏဟာ ဖာနန်ဒက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တောင် မပြည့်မီတဲ့အနေအထား ဖြစ်နေပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်စ်ကို ရောင်းချဖို့အတွက် စပို့တင်းအသင်းက ပေါင်သန်6း0 လိုချင်တာကြောင့် ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ နောက်ထပ် ပေါင်10သန်းလိုအပ်နေပါတယ်။ အဲဒီပေါင် ၁၀သန်းအတွက် ဂလေဇာ မိသားစုထံတောင်းခံခဲ့ရာ မခွင့်ပြုတာကြောင့် ဖာနန်ဒက်စ် တစ်ယောက် ယူနိုက်တက်ကိုလာဖို့ ကိစ္စဟာဇာတ်မျောဖြစ်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်နဲ့ဖာနန်ဒက်စ်တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းမပြီးပြတ်ဘဲကြန့်ကြာနေ တာကြောင့် ဖာနန်ဒက်စ်ကို မန်စီးတီးက ခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ယူနိက်တက်ဟာ အေစီမီလန်ကွင်းလယ်လူ ကတ်ဆီ ၊ အင်တာမီလန်ကွင်းလယ်လူ ဗီစီနို နဲ့ အက်တီကိုကွင်းလယ် လူတွေကို အငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့လိုက်လံကြိုးစားနေပေမယ့်လည်း အဆင်မပြေဖြစ်နေ ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ တရုတ်ကလပ်ရှန်ဟိုင်းရှင်ဟွာမှာ ကစားနေတဲ့ ဝက်ဖို့ဒ်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အစ်ဟာလို (Ighalo) နှင့် မိုနာကိုမှာအငှားကစားနေတဲ့ လက်စတာတိုက်စစ်မှူး ဆလက်မနီ (Slimani) တို့ထဲမှတစ်ဦးကို အငှားခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုအပိုင်းမှာ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့တုန်းကလည်း အများကြီးသုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။
လာကာကူ ဖယ်လိုင်နီ ဒါမီယံ တို့ကိုရောင်းချတာကနေ ပေါင်သန်း၉၀ကျော်ပြန်လည်ရရှိထားပြီး၊ အဲဒီ ငွေကြေးနဲ့ မက်ဂွိုင်းယား ဘစ်ဆာကာ ဂျိမ်စ်း တို့ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်အသင်းရဲ့ အသားတင်အသုံးစားရိတ်က ပေါင်သန်း၅၀ ကျော်သာရှိပါတယ်။ အသားတင်ဝင်ငွေ ပေါင်သန်း ၆၄၀ ကျော်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့် ၃ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်တဲ့ ယူနိက်တက် ဟာအခုဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ အသင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့တော့နည်းပြဆိုးလ်ရှားကအခုလိုပြောပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ အပြောင်းအရွှေ့ နှစ်ခုလောက်ကို လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ရပါမယ်။ ဈေးကွက်မပိတ်ခင်အသင်းကဝယ်ပေးနိုင်မလားစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ဝေဖန်ပြောဆိုသံတွေကိုအမြဲအာရုံစိုက် ထားလို့တော့မရပါဘူး။ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ အသင်းမှာ အုတ်မြစ်က ခိုင်မာဖို့အရေးကြီးပြီး သမိုင်းကြောင်းကို အခိုင်အမာ သိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အိမ်တစ်လုံးလိုပါပဲ ခေါင်မိုးကနေစလို့မရပါဘူး။ အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော်တို့ မိုးမလုံတဲ့ကိစ္စတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိပါတယ်။” ဆိုပြီးပြောပါတယ်။
ဒဏ်ရာရကစားသမားပေါင်းများစွာနဲ့လည်ပတ်နေရတဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်း ကိုဘယ်သူတွေရောက်လာမလဲ ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ကာရစ်တန်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှာ လင်ဒီလော့ဒ်နှင့်ပေါ့ဘာဂ် တို့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြောင်း သိရပြီး၊ Borthwick-Jackson အား Oldham Athletic အသင်းထံ ရာသီကုန်ထိအငှါးချလိုက်ပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။